With ukuthuthukiswa kolwazi nobuchwepheshe kanye nokuxhumana mobile kuyinto evamile e-mail iphelelwa lokuhambisana. Zonke izinhlelo ethandwa kakhudlwana ukuthi ukunikeza ithuba ukuxhumana ikhamera wewebhu kanye ne-microphone. Bavumela wena ukuzwa nje kuphela, kodwa futhi ubone umuntu esibukweni wesingameli sakho. Uhlelo sinjalo Skype. Enza ngendlela oyifisayo kalula ngokwanele, naphezu kweqiniso lokuthi uhlelo has a esikhulu kunalokho sokusebenza.
Into yokuqala okumele uyenze - ukulanda futhi ufake i-Skype kukhompyutha yakho, bese uvula futhi afeze inqubo yokubhalisa. Okulandelayo udinga ukuqinisekisa ukuthi isimo sakho iyasebenza - "Online" (uboniswa ekhoneni elingenhla esinxeleni zohlelo, kwesobunxele egameni lakho). Uma wayefisa, ungakwazi ukushintsha isimo sibe "Away", "Ungaphazamisi" noma "ongabonakali".
Ngaphambi usethe Skype, engeza oxhumana nabo ofuna (bayobizwa elise ohlangothini lwesobunxele zohlelo). Cindezela inkinobho "Engeza Imininingwane" in the search evulekile ensimini ufake igama lomsebenzisi we-imeyili wayefisa yomsebenzisi noma igama lilonke. Cinga umuntu ekhoneni eliphezulu kwesokudla uchofoze "Engeza ohlwini contact", bese "thumela". Umsebenzisi uzothola isicelo sakho sokugunyazwa, futhi nje ke wena uzobona isimo saso yokuba inethiwekhi.
Ukuze ulungise i-Skype, kumelwe futhi faka ulwazi lephrofayela yakho. Ukuze wenze lokhu, chofoza "Scype" - "Idatha yomuntu siqu" - "Hlela i-Akhawunti Yami". Esikhathini ithebhu evuliwe, faka ulwazi olumayelana nawe.
Manje ukumisa Skype, ngqo umsebenzi, ukhethe into "Amathuluzi" kubha imenyu, bese "Izilungiselelo ...". Izindawo ezisemqoka futhi ezivamile uhlele njengoba wayefisa. Engxenyeni "Ukulungisa oluzwakalayo" ingasetshenziswa ukuze ukhethe i-microphone nezipika, setha eyamukelekayo ivolumu ezingeni. Tab "Umsindo" yakhelwe ukuhlonza ezihlukahlukene nemicimbi isicelo - ucingo olungenayo noma umyalezo, amalungu input bese okukhipha of inethiwekhi, kanye ezihlukahlukene amaphutha. ungakwazi ukuvimbela zonke umsindo ngokuphelele uma kudingeka.
Ngokuxhumana ukhululekile udinga ukusetha i-Skype phezu zamanyala nezokungalungi ukudluliselwa eyamukelekayo izinga vidiyo. Ngakusasa ithebhu "Isethaphu Isiqophi" lisetshenziswa le njongo. Lapha ungakwazi ulungise ukukhanya yesithombe, futhi ucacise okwakuphume amakholi wevidiyo izokwamukelwa ngokuzenzakalela ngesicelo. Kungaba ngcono kakhulu ukushiya ukhetho "Akekho umuntu" futhi lisabela ezicelweni engenayo ngesandla. Uhlu abasebenzisi engadingeki Ungabuka "Oxhumana Uvinjiwe" engxenyeni efanele. Skype futhi ikuvumela ukuba kusebenze ikhono lokuthola futhi ukudluliswa kwedatha nge-Wi-Fi. Kuze kube yimanje, kubalulekile kuphela ukubeka umkhaza esigabeni ezifanele.
Lungiselela Skype ku-PC yakho ulula, kusukela uhlelo ngcono sesizogcwala futhi kulula kakhulu ukusebenza. Nalo lonke izilungiselelo kuyoba lula ukwazi ukuthi uzodlala bebodwa. Engeza izimali Skype esigabeni "Idatha yomuntu siqu", khetha "I-akhawunti yami ne-akhawunti - Kusho" - "Thenga isikweletu se-e Scype".
Yikuphi browser IPad Ungashintshanisa Safari
Ungenza kanjani isifiso sokuba sigcwaliseke masinyane?
'Ingwane' notamatisi. Ngokungafani nezinye izindlela ukutshalwa utamatisi kanye
Iyini isibini esontekile, kuphi futhi kanjani isetshenziswa kanjani?
Okuhlangenwe nakho kwami kokuqala: Yamaha TW200
Red stroka.Oformlyaem indenti ku-HTML